ကိုနိုင်း – ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုထင်ဟပ်ခဲ့တဲ့ကာရန်များ / လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၄၈ )
တနိုင်ငံလုံးက စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွေပေါ်မှာ တင်ထားပေမယ့်
မြန်မာပြည်မှာ လူပေါင်းသန်း ၄ဝ ကျော်ရှိနေပေမယ့်
ဒီအပတ် ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်ကိုတော့ တောင်တန်းတွေဆီကနေ ပျံသန်းလာတဲ့၊ ယုံကြည်ရာတွေကို ရဲရင့်မှုများ၊ စာနာနားလည်နိုင်မှုများ၊နွားနောက်သားနဲ့ ခေါက်ချိုရနံ့မူးယစ်ရီဝေမှုများနဲ့အတူ၊တမူးမြို့က ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာမိုးသက်ငြိမ်ဦးရဲ့ပွဲတော်ရက်များနဲ့မသက်ဆိုင်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုမပျော်ရွှင်မှုများနဲ့ ကဗျာတွေ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ကာရန်တွေကိုခံစားရင်း ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့တဦးထဲထုတ်ဝေခဲ့တဲ့”ပွဲတော်ရက်များနှင့်မသက်ဆိုင်”ခေတ်ပေါ်ကဗျာစာအုပ်ထဲက ဒီခေတ်ကိုပတ်သက်နေတဲ့ကဗျာများကို ခံစားမိပါတယ်။ ဒီကဗျာစာအုပ်ထဲမှာ ကဗျာဆရာ“လင်းသဏ်ညီ”ကတော့ “ကဗျာကပေးတဲ့အရသာကတော့ ခင်ဗျားတို့လျှာနဲ့ကိုက်,မကိုက်၊ ကဗျာတွေဖတ်ရင်းတိုက်ဆိုင်ကြည့်ကြပါလို့ အသိပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်”ဆိုတဲ့စကားကို ကျွန်တော်က ထပ်ဆင့်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာကတော့ ဒီလိုပြောပြထားပါတယ်။
ဒီ ဒဏ်ရာတွေ တင်ဆက်ဖော်ပြခွင့်ရဖို့
ဒါကို ကဗျာစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ချင်သူတိုင်း ခံစားမိမှာပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့ကဗျာတွေစုစည်းပြီး ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကိုလည်း ကဗျာရေးသူတိုင်းမှာ ဆန္ဒရှိနေကြမှာပါ။ အခုအချိန်မှာ ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်း ထုတ်ဝေရေးတိုက်တွေက စိတ်မပါနိုင်တော့ပါဘူး။ ကဗျာစာအုပ်ဟာ တနိုင်ငံလုံးက စာအုပ်အရောင်းဆိုင်တွေပေါ်မှာ တင်ထားပေမယ့် တကူးတကမေးမြန်းပြီး ၀ယ်မယ့်သူမရှိပါဘူး။ ကဗျာစာအုပ်ကို အရှုံးခံပြီးထုတ်ကြရတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လူပေါင်းသန်း ၄ဝ ကျော်ရှိနေပေမယ့် ကဗျာစာအုပ်ကိုဝယ်ယူအားပေးသူ သုံးရာမကျော်ပါဘူး။ အင်မတန်မှ အံ့သြစရာကောင်းအောင်ပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့များ ကဗျာကိုမှ တမ်းတမ်းစွဲနေရသလဲ
ကဗျာဆရာတွေကလည်းဇွဲရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာစာအုပ်လေးကိုမြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတာပါပဲ။ စာအုပ်လေးကိုမြင်လိုက်ရရင်ပဲ ဘ၀ကြီးဟာပြီးပြည့်စုံသွားသလိုမျိုး တစိမ့်စိမ့်နဲ့အရသာခံပြီး ပီတိဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွက်စာမူခဟာ ငါးထောင်၊ ခုနှစ်ထောင်၊ တစ်သောင်းလောက်ရတာပါ။ ဒီငွေကြေးလေးကိုတန်ဖိုးထားနေကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်တွေးကြည့်ရင် ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။
ဆက်ပြီးလျှောက်ရမှာပါပဲ။ ကွန်မြူနစ်တခါဖြစ်ရင် တသက်လုံး ကွန်မြူနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့။ တခါ ကဗျာဆရာဖြစ်ရင် တသက်လုံးကဗျာဆရာဖြစ်နေရမှာပါပဲ။ ကဗျာဆရာဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်းကဗျာရေးနေမှဖြစ်နေမှာပါ။ အရင်က ကဗျာရေးခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာကဗျာမရေးတော့ပဲ ကဗျာဆရာလို့စင်ပေါ်တက်ကြွားဝါနေသူတွေကိုတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး။ ကဗျာစိတ်က သေတဲ့အချိန်ထိ ကဗျာဝိညာဉ်ပူးကပ်နေမှာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လျှောက်ပါ။ ပျော်ပွဲရက်တွေနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်သလို၊ ကဗျာလမ်းပေါ်မှာ ဆက်လျှောက်ပါ။ ဆက်လျှောက်နေလိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်နေပါတယ်။
ကဗျာဆရာက ဘာတွေဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါတွေ့ရပါတယ်။
“ဒဏ်ရာရ မြစ်တစ်စင်း”ကဗျာကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
ကဗျာဆရာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေကို ဒီမြစ်တစင်းစီးဆင်းမှုနဲ့အတူ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစင်းနဲ့အတူ ကဗျာဆရာရဲ့ခံစားမှုတွေ ရောပါစီးဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာဆရာ လိုက်ပါစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးသိနေကြမှာပါ။ သိနေသူအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း ကဗျာဆရာခံစားရသလို ခံစားနေကြမှာပါ။ ဘယ်သူမှ ဥပေက္ခာမပြုရက်ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ မျက်နှာလွှဲခဲပစ် မလုပ်ရက်ခဲ့ကြပါဘူး။
မြစ်က စီးဆင်းနေပါတယ်။ မြစ်နဲ့အတူ လိုက်ပါစီးမျောခံစားနေတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ခံစားမှုဟာလည်း အံကြိတ်ကြေကွဲ၊ အသံတိတ်ကြုံးဝါးမှုတွေနဲ့တ င်လုံလောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုဖြတ်သန်းမှုကို ကဗျာရေးဖွဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာကိုက တာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီ။ မြစ်တစင်းလို ဆက်စီးဆင်းနေတာကို ဆက်ခံစားကြည့်ချင်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာရဲ့ဖြတ်သန်းမှုမှာ “စစ်”ဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း ကဗျာဆရာတွေအတွက် ခံစားဖြတ်သန်းနေရမှာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာနေသူတွေအတွက် ဘယ်လိုမှငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းတွေပါပဲ။ ဒီငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ စစ်ပွဲတွေအပေါ်မှာ ကဗျာဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ၊ ဘယ်လို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သလည်းဆိုတာကို ဆက်ခံစားကြည့်ချင်ပါတယ်။
စစ်ဆိုတာ အသံကြားတာနဲ့ ခြောက်လှန့်နေပါတယ်။ လူတွေကလည်း ကြောက်ရွံ့နာကြည်းမုန်းတီးနေပါတယ်။ မုန်းတီးနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက စစ်မဖြစ်ဖို့တားဆီးမရနိုင်ကြပါဘူး။ စစ်ဆိုတာပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အတ္တတွေ၊ အာဃာတတွေ၊ လောဘတွေဒေါသတွေ စွန်းထင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲ တရားသောစစ်လို့ကြွေးကြော်နေပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေဟာ ညီအကိုချင်း ပစ်သတ်နေတာကိုတွေ့နေရမှာပါ။ အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ ကဗျာဆရာပြောသလို “စစ်ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်”ဆိုတာမျိုးနဲ့ဖြေသိမ့်နေကြရတာပါပဲ။
အမှန်တကယ်လည်း စစ်ကိုရပ်စဲနိုင်ဖို့ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းချင်သူတွေရဲ့စေတနာနဲ့ စိတ်သန့်ရှင်းမှု သင်္ကေတပါ။ စစ်မှာမတရားတာမရှိသလို၊ တရားတာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ တရားသောစစ်ဆိုတာ လူကြားကောင်းအောင်ပြောနေကြတာပါ။ အတ္တတွေ၊ အာဃာတတွေတော့ပါနေမှာပါပဲ။ မတရားတဲ့စစ်ကို ဘာဖြစ်လို့တိုက်နေကြသလဲလို့ မေးရပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဆိုတဲ့အသံထဲမှာ ပြည်သူတွေ အသက်တွေပေးဆပ်လိုက်ရသလို၊ အသက်မသေပဲ ကျန်နေတဲ့လူတွေမှာ ကြေကွဲပူဆွေးမှုတွေကျန်ခဲ့တာပါပဲ။
ဆက်ဖတ်ပြီး မခံစားနိုင်တော့အောင်၊ စိတ်ထဲမှတ်လို့မရနိုင်လောက်အောင် မွန်းကျပ်ပိတ်ဆို့နေပါတယ်။ စစ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်တွေထဲမှာ တဆစ်ဆစ်နဲ့ နာနေခဲ့ရပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်နာကျင်စွာခံစားနေခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ စစ်ကြောင့်ရော၊ မတော်လောဘတွေကြောင့်ရော တောတောင်တွေပျက်သုဉ်းခဲ့ရပါတယ်။ တောတောင်တွေမရှိတော့တာ၊ တောကြောင်တွေကြောင့်လို့ပြောနိုင်သလို၊ တောတောင်တွေမရှိတော့ရင် တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်နေကြမှာပါ။ ဒါကို ကဗျာဆရာက ခံစားရေးဖွဲ့ပြသွားပါတယ်။
ဆတူ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တောကြောင်ကို
အခု … ဖြောင်းဖြောင်း
ခေတ်ကြီးကပျက်နေတော့ တောကြောင်တွေလက်ခမောင်းခတ်နေကြမှာပါပဲ။ အခုဆိုရင် တောကြောင်တွေလက်ခမောင်းခတ်နေတာကို လူတွေသတိထားနေကြရပါပြီ။ မတရားဥပဒေတွေကြောင့် တရားဥပဒေတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခေတ်ဆိုးကို ရောက်နေရသလိုဆိုတော့၊ လူက လူကိုကူတဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်နေတာက ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရယ်၊အခြေခံစားဝတ်နေရေးတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါတွေအတွက်စိုးရိမ်သောကတွေ တဖြေးဖြေးပါးလျပျောက်ကွယ်သွားဖို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ ဇာတ်မျောထဲမှာမျောမပါသွားကြဖို့ ဆုတောင်းရုံကလွဲပြီး ဘာများတတ်နိုင်ဦးမှာလဲလို့ ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်။
မြိုသိပ်ခြင်းသာ တို့ဘ၀ တို့ကမ္ဘာ။
ကဗျာတွေကိုခံစားရင်း သက်ဆိုင်သူတွေရော၊ ပြည်သူတွေပါ
လွတ်လပ်စွာ က, နေနိုင်ပါစေ။
(သူရိယနေဝန်းဂျာနယ် – Vol 1. No 185.3Feb 2018)
ကိုနိုင်း – ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကိုထင်ဟပ်ခဲ့တဲ့ကာရန်များ